I-Asus Zenfone Max Pro M2 iya kuba yifowuni yokudlala kwaye iza kufika ngoDisemba 11 | I-Androidsis
UAsus uqinisekisile namhlanje ukuba uza kuyazisa nge-Asus smartphone Zenfone Max Pro M2 kumsitho ozakubanjelwa eIndonesia Nge-11 ezayo kuDisemba. Ifowuni iya kuba lilandela kwi Zenfone Max Pro M1, iselfowuni eyamkelwe kakuhle ngabasebenzisi.
Okumangalisayo kukuba IZenfone Max Pro M2 izakwaziswa okokuqala eIndonesiangelixa eyandulelayo yaqaliswa okokuqala e-India. Inkampani ibanga ukuba iZenfone Max Pro M2 yifowuni yokudlala. Ke ngoko, kulindeleke lukhulu kwesi sigxina.
Ngelixa inkampani isitsho njalo yifowuni ye abadlali, ifowuni inokuba ineempawu zesoftware yomdlalo ezifanayo nezo Hlonipha Udlala, endaweni yezo zomnxeba wokudlala onje nge Ifowuni yeROG nguAsus.
Iingxelo zangaphambili zibonisa ukuba ifowuni iya kuba ne-intshi ye-6 intshi okanye enkulu ye-IPS LCD ngesisombululo se-FullHD +. Isixhobo kulindeleke ukuba sibandakanye i-4 GB ye-RAM kwaye sibe neemodeli ezimbini ngokusekwe kugcino lwangaphakathi: i-64 GB kunye ne-128 GB. Silindele enye into eyahlukileyo ene-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi.
Ezinye iinkcukacha zibonisa ukuba ifowuni iya kunikwa amandla yiprosesa ye-octa-core AIE Qualcomm Snapdragon 660, ebonelela ngokuphucuka okumangalisayo ekusebenzeni kwemizobo xa kuthelekiswa ne-chipset ye-Snapdragon 636 egunyazisa iZenfone Max Pro M1.
Ukufota, ifowuni kulindeleke ukuba ibonise ukuseta ikhamera kathathu ngasemva, apho inzwa ephambili yekhamera iya kuba zii-megapixels ezili-13. Isoftware inobulumko, ifowuni iya kuqhuba inkqubo yokusebenza ye-Pie ye-9 yamva nje ebhokisini.
Nangona inkampani ingakhange ichaze, kunokwenzeka ukuba uAsus naye angabhengeza yazisa iZenfone Max M2 ecaleni kweZenfone Max Pro M2 kwinyanga ezayo. Ifowuni kulindeleke ukuba ifumaneke e-India kwakamsinya emva kokuphehlelelwa kwe-Indonesia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Asus Zenfone Max Pro M2 iya kuba yifowuni yokudlala kwaye iza kufika ngoDisemba 11
I-Minecraft ye-Android isivumela ukuba sizame umdlalo simahla